Is-diiwaangelin – CollegeBound Saint Paul
Waxaa jira siyaabo badan oo ilmaha loogu qori karo CollegeBound Saint Paul.
Waxaa ilmaha laga diiwaangelin karaa intarnetka ka dib markay dhashaan ama waxaa si toos ah loo diiwaangelin karaa haddii diiwaankooda dhalashada laga dhigo mid aan qarsooneyn.
Si ilmaha loogu qoro CollegeBound Saint Paul, waa in ay dhashaan 1-da Jannaayo, 2020 ama ka dib, dabadeedna waa in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Waa in ay soo dagaan Saint Paul intaysan lix sano gaarin ka hor
Haddii ay qoys filayaan in uu u dhasho ilmo uur lagu sido, kol hore ayey u sii diiwaangelin karaan CollegeBound Saint Paul. Diiwaan-gelinta hore ee ilmaha macnaheedu ma aha in barnaamijkii sidaas lagu qoray. Waxaan ku xasuusin doonnaa in aad qorto ilmaha marka ay dhasheen.
Ka dib marka la isku qoro CollegeBound Saint Paul, waxaa dadka guryahooda loogu soo diraa waraaqo soo-dhaweyn ah oo ay ka helayaan macluumaadka la isugu diiwaan geliyo Kadinka Intarnetka Koontada ee lacagta waxbarashada. Waxaad fiirin kartaa lacagta ku jirta koontada ilmahaaga, lacagta aad geliso iyo waxyaabo badan.
Wax su’aalo ah?
Diiwaangelinta marka uu ilmuhu dhalanayo
Carruurta diiwaankooda dhalashada lagu arki karo liiska dadka magaalada si toos ah ayaa loogu qorayaa CollegeBound Saint Paul.
Markay ilmo dhashaan oo loo buuxinayo foomka dhalashada “Haa” uga jawaab su’aasha ah: ‘Ma rabtaa inay dadweynuhu arkaan dhalashada ilmahaaga
Haddii aadan rabin in la arko dhalashada ilmahaaga, waa wax caadi ah! Mar hore ayaad sii diiwaan gelin kartaa ilmahaaga.
Carruuraha ay qoysaskoodu yihiin kuwa dakhligoodu yahay danyar ama dhexdhexaad ee leh koontada lacagta kuleejka oo ay ugu jirto inta u dhaxeysa $1 ilaa $500:
Is-diiwaangelin ah intarnetka
Marka ilmahaagu dhasho, waxaad ku qori kartaa CollegeBound Saint Paul adigoo buuxinaya foomka is-diiwaangelinta ee intarnetka.
Waxa keliya ee aad u baahan tahay waa inaad qorto ilmahaaga maanta:
Adigoo bixinaya macluumaadka ilmaha
Macluumaadka waalidka/masuulka koowaad iyo/ama macluumaadka waalidka/masuulka labaad
Kol hore in la isu diiwaan geliyo CollegeBound Saint Paul
Markaad kol hore sii diiwaangeliso ilmahaaga, waxaan ku soo xasuusineynaa in aad ku qorto barnaamijka marka ilmuhu dhasho. Diiwaangelinta hore waxa keliya ee aad u baahan tahay waa:
• Taleefan iyo/ama cinwaanka boostada intarnetka
• Qiyaasta taariikhda dhalashada ilmahaaga
Markaad kol hore sii qorto ilmaha kuu dhalan doona, marka ilmuhu dhasho ayaa lagu soo xusuusinayaa si aad uga diiwaangeliso CollegeBound Saint Paul.”
Waxa uu ilmahaagu xaq u yeelan doonaa:
• Koontada lacagta kuleejka oo ay ugu jirto $50 oo Magaalada uga timid
• Hadyad ahaan si loogu caawiyo lacagta keydinta inay u badato
• Fursadaha carruurnimada hore
• Macluumaad ah kaabeyaal dhaqaale oo loo hayo qoyska oo dhan
Su’aalaha La Is-weydiiyo Inta Badan ee